Shaqooyinka ku yaal Dubai 2018 ee loo yaqaan 'fresh' Waxaa lagu dabaqi karaa meel aan la rumeysan karin oo laga shaqeeyo
Shaqaaleynta shaqo ee Dubai
Published by Shirkadda Dubai City at December 8, 2017
Shaqooyinka Dubai ee 2018 ee dadka cusub
Waa maxay sababta aad u shaqaaleysiin karto shirkadda Dubai City?
Shaqooyinka ku jira Dubai 2018 ee looxyo, marka loo eego shaqooyinka wanaagsan ee UAE. Shaqo-dooneyaal tira badan oo raadinaya shaqo-bixiyeyaal mushahar fiican leh. Tanina waxay si la mid ah muhiim ugu tahay horumarkaaga shaqo ee ka UAE. Waxa ugu weyn ee raadinta shaqooyinka ee UAE. Guud ahaan kahadalku waa in la helo loo shaqeeye gaar ah. Sidoo kale haddii aad tahay qof ajnabi ah waxaad u baahan tahay inaad shaqo-bixiye u hesho yaa bixin doona ama kordhin doona shaqada fiisada aad loogu talagalay.
Sida xaqiiqda ah, waxaa jira dhawr fursado xirfadeed. Markaad tahay shaqo-doone cusub, waxaa laguula dhaqmi doonaa sidii qofkasta oo ku sugan Dubai City. Iyo helitaanka shaqo addoomo ah hubaal ma aha habka ugu wanaagsan ee lagu heli karo shaqo cusub. Waxaad ubaahantahay inaad ogaatid talooyin dhowr ah si aad shaqo ugaga hesho UAE. Mid ka mid ah qaababka ugu wanaagsan waa in Akhri hagaha u dhaqaaqida Dubai. Ama la xiriir dadka kale ee iyaguna shaqo raadiska ah naga raadinaya Kooxaha sheekeysiga ee WhatsApp.
Waxa ugu adag ee shaqo laga helo Dubai. Dhab ahaantii waa helitaanka shaqada ugu horreysa. Kaliya si loo helo a habka fiisada ee loo maro jiho sax ah. Dhanka kale, shaqo doon kasta wuxuu u muuqdaa marka ugu horeysa qof wanaagsan. Gaar ahaan oo ah shaqo cusub oo cusub oo ku yaala Dubai iyo Gulf Area. Laakiin nasiib daro ka dib shaqo raadin muddo dheer ah. Ujeedku wuxuu ka baxaa albaabka iyo waqtiyo xun oo soo socda. Dadka qaarkood ma heli karaan shaqo oo ay iska daayaan.
Sidee loo helaa shaqo-bixiyeyaasha Dubai si dhaqso badan?
Iyadoo tan maskaxda lagu hayo, waa inaad bilowdaa raadinta boos shaqo hoose. Halkii shaqo cusub oo laga sameeyay UAE oo leh qaab nololeed qurux badan. U hel wax sida ugu dhakhsaha badan ee aad karto. Tusaale ahaan, shaqooyinka banaan ee loogu talagalay booqashada cusub sida nadiifiyaha ama gabadha. Qaar ka mid ah shaqaalayaasha goobaha shaqo raadinta xitaa way awoodi karaan waxay kaa caawineysaa inaad hesho shaqo cusub Bariga Dhexe. Ujeedadaas oo ah in la helo shaqo riyo ah sida qof jecel oo kugu filan inuu ku caawiyo. Xaqiiqdi, waxaad ubaahantahay inaad horay ugu dhaqaaqdid wejiyada yar kahor intaadan helin shaqo helida Bariga Dhexe.
Qaabka ugu dhaqsaha badan ee loo helo dalab shaqo oo laga helo Dubai ama Abu Dhabi. Waa in la xiriir madaxyada ku saabsan WhatsApp. Maalmahan maahan qofka kaliya ee shaqo doonka ah ee Bariga Dhexe. Waxaad u baahan tahay inaad u shaqeyso si caqligal ah si aad u hesho. Dhammaan wixii aad sameyn kartid waa shaqeeyn ku filan, sugna wakhtiyada wanaagsan in ay dhacaan. Had iyo jeer labalaab labadaba CV-gaaga iskuna day inaad raadso socod ku saabsan wareysiga Dubai. Maahmaahda Ingriiska ayaa dhahday way fiicantahay in la hadlo. Iyadoo tan maskaxda lagu hayo iskuday inaad raadiso xal deg deg ah. Iyo sida ugu dhaqsaha badan waa in la helo loo shaqeeyayaal cusub adiga oo aan lacag badan ku kaydsan koontadaada bangiga.
Ma mudan tahay in eegaya Shaqooyinka Dubai 2018 loogu talagalay dibuhabaynta?
Yaa kaa caawin kara inaad hesho shaqo ku xigta?
Shaqada Dubai ee 2018 ka dhigaysa qaar ka mid ah madaxda fuliya hurdada. Qaar ka mid ah macaamiishayada ayaa email u diraya "Tani ma aha a habka wanaagsan ee shaqo loogu helo Dubai!! ". Waxkani ma shaqeynayo. Laakiin dhinaca kale, xirfad-raadsashada xirfad-yaqaanada marnaba su'aashu waydiiso. Ma haystaa khibrad ku filan gaar ahaan dalbashada shaqo ee Dubai iyo Abu Dhabi? Si kastaba ha noqotee, qaar badan oo ka mid ah maareeyayaasha shaqaaleynta uga jawaab kuwa shaqo doonka ah jawaabo caadi ah. Marka sidee loo heli karaa shaqadan riyada ah run ahaantii ?. Jawaabtu ma fududa. Waxaa jira dhowr qodob oo ay tahay inaad maamusho helitaanka loo-shaqeeyayaasha ee UAE.
Hubi inaad rduco iyo warqad dabool waa labbis la'aan.
Kordhi adiga magaca shakhsiga ah ee magaalada Dubai
Khibradaydu waxay la kulmeysaa shaqaale qorista.
Hit the maamullada saxda ah ee Imaaraadka Carabta.
Hubinta in emailkaagu u muuqdo xirfadle
Hagaha raadinta shaqo-bixiyayaasha ee UAE
Shirkadda Dubai City abuuray a hagid dhamaystiran oo loogu talagalay dadka ajnabiga ah. Gaar ahaan kuwa raadinaya inay shaqo ka helaan Dubai. Maahan wax ku saabsan iyagoo raadinaya shirkad cusub oo laga leeyahay UAE. 2018 iyo 2019 waxay ku saabsan tahay qofka saxda ah inuu taajir noqdo. Waxaad ubaahantahay inaad ogaatid faahfaahinta qofka saxda ah. Qofka aad rabtid inaad ka dhaadhiciso inuu ku siiyo fursad aad isku caddeyso. Tusaale ahaan, qofka ku habboon ayaa ku siin kara a fursada aad uga shaqeyn karto shirkadda.
Sida ugu fiican in la bilaabo shaqada waa in la helo loo shaqeeyaha. Xaqiiqdii, isla waddanka aad ka timid. Tusaale ahaan, haddii aad ka timid Pakistan iyo raadinta shaqo-bixiye Dubai. Sida iska cad, habka ugu caqliga badan ayaa ah in la helo Pakistani shirkad. Tani waxay noqon kartaa loo-shaqeeye fiican adiga. Waxaad u maleyn kartaa in qaabkan uusan aheyn habka saxda ah si aad u horumariso xirfaddaada ee dalka Isutagga Imaaraatka Carabta Emirates. Laakiin xaqiiqdii waa habka ugu xalka fiican haddii aad rabto inaad si dhakhso leh shaqada u bilowdo.
Sidoo kale, shaqooyinka Abu Dhabi Way sahlan tahay in la helo halkii laga heli lahaa caasimadda UAE. Shaqooyinka Dubai ee 2018 ee dadka cusub waxaa laga heli karaa websaydhka!
Shaqooyinka Dubai ee 2018 oo loogu talagalay ardayda cusub!
Resume Resume shirkadeena
Intaa waxaa dheer, Aasiya iyo Yurub shaqaaleyaal xirfadlayaal ah ayaa dooranaya xirfad bangi oo ku yaal Dubai iyo Abu Dhabi. Laakiin si la mid ah muhiim kuugu ah adiga ayaa ah inaad qaaddo talaabooyin raadin shaqo oo firfircoon si aad uhesho aayahaaga mustaqbal ee Imaaradka 7. Shirkadda Magaalada Dubai waa xilligan caawinta ugaadhsiga shaqo raadiska. In kasta oo ay tani run noqon karto in shirkaddeenna ay tahay tan ugu wanaagsan raadinta iyo shaqaalaynta min yar ilaa kuwa fuliya. Dhanka kale, kooxdeena ayaa caawisa Shaqooyinka Dubai ee India. Waxaa muhiim ah in la ogaado in shirkadeena maareynayso iibinta kala duwan iyo boosaska suuq geynta United Arab Emirates
Gacanta telefoonka gacanta ee Gacanka
Shirkadda Dubai City oo leh caddaymaha ugu adag ee ah shaqo raadinta moobiillada moobiilka ayaa si fiican uga shaqeyneysa Dubai. Qadar ayaa sidoo kale kor u qaadaya qorista moobiillada si wadajir ah Singapore. Dabcan, maareynta guud ee isticmaalaya moobilka si ay u shaqaaleeyaan shaqooyin cusub. Si aad uhesho hab kale, qodob kale oo muhiim ah in shirkadeena ay ka mid tahay mid kasta raadinta shaqo ee Dubai waa qoritaanka WhatsApp.
New shaqaaleysiinta maamulayaasha ee 2018 iyo 2019. Xaqiiqdi waxay raadineysaa inay buuxiso boos cusub oo iib ah iyo suuq geyn Dubai. Dhanka kale marka suuq geynta uu kici doono sidoo kale jagooyin maareyn oo cusub oo ay maamusho Qadar iyo Saudi Arabia waa la heli doonaa. Si loo tilmaamo waxaan raadinaynaa maamulayaasha IT-ga iyo khabiirka injineernimada. Waxaan ka mid nahay kuwa ugu fiican Shaqaalaha raadinta shaqo ee dalxiisayaasha Dubai. Shaqooyinka Dubai 2018 loogu talagalay dib u dhiska billowga! - Resume Resume shirkadeena.
Duruufahaas awgood, shaqo doon badan ayaa ku sugnaa Dubai in kabadan 3-5 jeer. Xaaladaas, dad badan oo shaqo doon ah ayaa yimid UAE oo ay isku dayaan inay keenaan reerka iyo dabcan sidii ay ugula noolaan lahaayeen magaaladan cajiibka ah ee shaqada. Mustaqbalka fog taasi waa sababta Shaqaalaha Hindiya iyo saraakiisha yurub iyo maraykanku ku soo laabtaan UAE. Marka la eego qodobbadaas, musharrixiintu waa la soo ururiyey iyo sida loo qoray ayaa abuuray khaas ah xidhiidhka la leh maamulka qorista ee magaalada this. Qeybta ugu badan, dadka shaqo doonka ah waxay jecel yihiin Dubai City. Guud ahaan magaalada Dubai iyo Abu Dhabi waa New York oo ku taal Steroids.
Iyada oo dhismaheeda macquul ah markaad ka shaqaynayso UAE. Waqti ka waqti maadaama aad raadineyso shaqo, waxaad arki kartaa skylines cajiib leh. Raadi xirfad ee warshadaha casriga ah. Ilaa wakhtigan xaadirka ah, waxaad xirfad ku heli kartaa Google ama xitaa naadiyada habeenkii ee UAE. Iyada oo aan la daahin xilligan xaadirka ah farshaxanka casriga ah ee Dubai waa mid la yaab leh. Iyo dabcan, waxaad si fudud u heli kartaa cimilo cajiib ah iyo xeebo ku xeeran agagaaraha Dubai Area. Adhib iyo wararka xanta ah ee ku saabsan shaqo raadinta mobilada, Dubai waxay leedahay wax ka badan inta ay ka raadinayso shaqo raadis faahfaahsan. Haa, safka hore ee Abu Dhabi sidoo kale isagaa leh fursadda ugu fiican ee musharixiinta. Marka la eego qodobbadaas, labadan magaalo ee cajiibka ah waxay heleen dhismaha ugu weyn ee ku yaal UAE. Iyo mid ka mid ah kuwa ugu weyn caalamka ee aad awooddo bilow xirfaddaada cusub.
Dubai City waa meel aan la rumaysan karin in ay shaqeyso
Si aad uhesho qaab kale, xirfad cusub ayaa sidoo kale laga heli karaa Dubai. Iyadoo maskaxda lagu hayo, xirfad dhakhso ah oo iibka ah ayaa sidoo kale awood u leh in qof kasta oo ka tirsan UAE u helo waana arrin qurux badan. Waa wax sareeya aduunka ugu sareeya ee sii kordhaya ee adduunka. Dhinaca wanaagsan ee 50 sano kahor Imaaraadka Carabta, ma jirin wax halkaas ka jiray. Falanqaynta ugu dambeysa, waxaad hadda ku lahaan kartaa mid ka mid ah shaqooyinka ugu wanaagsan ee gudaha Dubia oo ah magaalo-weynta ugu weyn dhulka! Magaalada Dubai waxaay caan ku tahay caasimada madadaalada oo ugufiican meel loogu talagalay murashaxiinta Bariga Dhexe. Dhanka kale, magaalada Dubai waxay maamushaa khibrado shaqo oo dhammaystiran. Oo mushahar weyne u tartamaya musharaxiinta.
Shaqooyinka Dubai ee 2018 oo loogu talagalay ardayda cusub! - Soo-dejinta Resume shirkadeena.
Meelaha aad ka heli karto shaqo Dubai
Magaalada Dubai waxay si toos ah ugu martiqaadeysaa musharaxiinta galabyada soo bandhigaya mawaadiicda iibka. Ma aha in la xuso farshaxan casri ah shaqooyinka Abu Dhabi, jaranjarooyinka isku qurxinta leh ee shaaha leh oo ay weheliso jagooyin kafee qaxwaha oo buuq badan. Intaa waxaa sii dheer, waad heli kartaa xirfad Makhaayado wanaagsan oo ay kujirto cuntooyinka Emirati. Xaqiiqdii, shaqooyinka ka jira Magaalada metro waa wax mudan in la helo. Xaqiiqdii, Dubai waxay bilaabtay jasiirado dadku sameeyay halkaas oo aad si fudud u heli karto boos cusub. Si aad uhesho qaab kale, suuqyada waaweyn ee dukaameysiga ayaa sidoo kale shaqaaleysiinaya magaalada.
Si wadajir ah ula shaqeeya xadiiqooyinka biyaha lagu ciyaaro, dabcan, naadiyo iyo fursado shaqo oo ku haboon. Sidoo kale, lamadeg shaqooyinka hudheelada hudheelka ee UAE.waxaa jira kun fursado shaqo oo aad ka heli karto oo aad ka sameyn karto Dubai. Isla tusaalahan, shirkadeena waxay jeclaan laheyd inay u mahadceliso, Emirates. Dalxiis ugu fiican iyo Waqti ku dheehan tahay inuu booqdo Dubai oo aniga i siiya fursad aan wax ku sameeyo hawlaha shaqo raadinta ee fiisada shaqada ee gudaha UAE.
Fikrad kale oo fiican si shaqo hel waa in Raadinta suuqa shaqada ee Gacanka. Tani waxay noqotaa mid caan u ah muwaadiniinta. Gaar ahaan kuwa doonaya in ay kobciyaan xirfadahooda iyaga oo ku jira Emirates. Shaqooyinka Dubai ee 2018 ee dadka cusub ayaa laga heli karaa boggayaga internetka!.
Booqo Dubai City waqtiga fasaxa
Waqtigan xaadirka ah - Xirfadda Dubai 2018 waa mawduuc kulul. Mid ka mid ah shuruudaha ugu xiisaha badan Dubai kaliya raadinta xirfad shaqo waa cimilada. Halkan iyo halkaas oo ku yaal Imaaraadka Carabta, had iyo jeer waa xagaaga xagaa iyo wixii aad samayso. Asalka waqtiga ugu fiican ee aad booqan karto Imaaraad ahaan safar Shaqada, raadinta ayaa socota inta lagu guda jiro Oktoobar-Maarso. Raadinta shaqada, falanqaynta ugu dambeysa, waqtigaas ayaa aad uga kalsooni badan marka heer kulku qabow ku filnaado booqashada shirkadaha leh Resume.
Dubai waa meel aad u qurux badan, xaqiiqdii, ma ogtahay in inta badan roobka 6 kaliya ee sanadkiiba mar? Si kastaba ha ahaatee, haddii aad garaacday UAE wakhtiga fasaxa. Gaariga qorraxda, badda, iyo ciidada ugu fiican waa gu'ga iyo dayrta waxay ka badan yihiin sidii ay kuugu wanaagsanaan lahayd inaad ku dhisto jirkaaga maalinlaha ah ee Dubai ama Abu Dhabi xeebaha oo qabow ka dib mugdi iyo maqaar madow.
Ha iloobin waqtigan inay u fiicantahay Shaqooyinka Dubai ee 2018 ee dadka cusub.
WhatsApp Shaqaalaynta kooxaha Dubai
Shirkadeena, sidoo kale waad awoodi kartaa ku biir kooxaha kala duwan ee WhatsApp. Waqtiga dambe ama ka dib waxaad awoodi doontaa inaad kala hadashid qorista shaqaalaha Dubai. Shirkadda Dubai City caawinta dadka ajnabiga ah bulshada Bariga Dhexe si aad u hesho Shaqooyinka Dubai ee 2018. Marka aad raadineyso shaqo ku sugan Dubai waa inaad tixgelisaa WhatsApp sida qalab qorista. Waxaa qoray telefoonka gacanta shaqaalaysiinta, waxaad awoodi doontaa inaad shaqo ka hesho Bariga Dhexe.
Iyadoo shirkadeena, in ka badan 20,000 shaqaaleyaal ah waxay shaqo ka heleen Dubai kaliya adigoo ku soo biiraya our Kooxaha WhatsApp gudaha UAE. Waxaa jira wax ka badan 20 shaqo raadinta kooxaha si gaar ah loogu sameeyay duulimaadyada caalamiga ah. Haddii aad ugu dambeyntii go'aansato inaad ku biirto our WhatsApp kooxaha ku sugan Dubai waa inaad isla markiiba taas sameysaa maxaa yeelay way u qalmaan. Waxaad ka heli kartaa shaqo 3 ama 4 maalmood kaliya adoo ku dhejinaya Resumeygaaga dhawr hay'adood oo shaqaalaysiineed oo ku yaal Bariga Dhexe.
Waa maxay sababta ay ugu qalantid inay u guurto UAE?
Dubai waa meesha ugu weyn ee loogu talagalay dadka shaqo doonka ah. Sida xaqiiqda ah, Musharixiinta ka socota Koonfur Afrika ayaa hada lagu shaqaaleeyaa Dubai. Sababta oo ah caasimada Imaaraatka Carabtu waxay si dhakhso leh ugu dheehan tahay horumarka mustaqbal ee mustaqbal ee qof walba. Waxa jira inbadan oo shaqo bixiyeyaal ah gudaha Imaaraadka Carabta. Markaa hadaad jeceshahay inaad horumar ka gaadho noloshaada xirfadeed. Shirkadaha Dubai iyo Abu Dhabi waa meesha ugu fiican ee aad ku shaqeyn karto. U guurista Emirates markasta waa heshiis weyn. Waxba ma laha waxa maqaalada kale. Dib u noqoshada UAE waa wakhti iyo lacag qaadashada habka loogu talagalay dadka ajnebiga ah.
Imaaraadka Imaaraadka Carabta, waxaa jira hanti badan oo ku wareegsan magaalada. Dubai sidoo kale waa magaalo aad u qurux badan. Sidaas, waxaad u baahan tahay yaqaan sida loo soo gasho Dubai iyo sida loogu dhaqmo ee ganacsi deegaanka. Sababta oo ah markaad u guurto Imaaraatka. Xaqiiqdii, waad aqoonsan tahay sida cajiib ah waa magaalo loogu talagalay dadka shaqo doonka ah. Dhanka kale, haddii aad go'aansato inaad sii joogi doonto Emirates. The Nidaamka bangiyada ayaa ka sii yaab badan. Dadka deggenaa xaafadaha Abu Dhabi ayaa deyn qaatay. Iyo wax ka yar sanadihii 10 ayaa bixinaya dulsaar.
Emirates waa dal dhul ah oo loogu talagalay madaxda sare ee tayo leh. Dhanka kale, haddii aad raadineyso xirfad leh waxbarasho wanaagsan meeshan waa adiga. Dhab ahaantii waa u qalantaa in la raadiyo Shaqooyin ku yaal Dubai 2018 ee kuwa cusub.
Shaqo loogu talagalay haweenka uurka leh ee Dubai
Dumarka ku jira Emirates ayaa hadda suuqa kala iibsada. Gaar ahaan sanadaha soo socda ee 2019 iyo 2020. Suuqa sii kordhaya oo loogu talagalay haweenka uurka leh ee qallafsan sameynta meeshan. Hubi inay tahay meesha ugu badan ee qoysaska la booqdo. Maalmahan inbadan Gabdhaha u guuraya Imaaraatka si ay shaqo u helaan. Ka hor intaanu ragga noqon oo keliya inay noqdaan mas'uuliyiinta UAE. Laga soo bilaabo sannadihii la soo dhaafay, isbeddellada ayaa isbeddelay Bariga Dhexe. Hadda haweeneydu wey wadi kartaa iyo ka shaqeeya shirkadaha ugu wanaagsan Saudi Arabia.
Shirkadaha imminka waxay shaqaaleysiiyaan haween ka shaqeeya kuwa badan. Gaar ahaan tan cusub Expo mashruuca 2020 ayaa la bilaabay. Dubai hada waxay higsaneysaa a Xirfadda Dubai ee Philipino, waxay hadda bilaabayaan mashaariicda dowladda. Guud ahaan dadku waxay caawiyaan dadka caalamka si ay u degaan mid ka mid ah Emirates 7th.
Dhinaca kale, haddii aad tahay haween u gooni ah. Oo fiiri qorista xirfad shaqo ee Dubai 2018 waxaan udub dhexaad u nahay taas.
Gabagabeynta shaqa doonka ee Emirates
Xirfadaha ku jira Imaaraadka Imaaraadka Carabta ayaa laga heli karaa meelo badan. Foomka a Xirfadaha baabuurta ee Dubai warshadaha, ilaa shaqooyinka bangiyada ee Dubai. Dhamaan shuruucda ayaa quseysa ugaarsiga shaqo ee cusub ee Emirates. Laakiin waa in la xasuusto inaadan aheyn qofka keliya. Gaar ahaan adigu ma tihid qofka ugu xun oo doonaya in loo raro Dubai. Hubso inaad wax walba diyaar u tahay wax cusub fursado ah in la yimaado albaabkaaga.
Shaqooyinka Dubai ee 2018 ee dadka cusub!
Ka badan 80 boqolkiiba musharixiinta raadinaya a Xirfad shaqo oo ku taal Dubai. Hubso inaad diyaar ahaato iyo Resume Resume halkan shirkadda ugu dhaqsaha badan ee waddanka Isu-tagga Imaaraadka Carabta. Shirkadda Magaalada Dubai waa awood si lagaaga caawiyo inaad shaqo ka hesho Gacanka.
Shirkadda Dubai City waxay hadda siisaa wax wanaagsan hagayaal ee Shaqooyinka Dubai. Kooxdayadu waxay go'aansadeen inay ku daraan macluumaadka luqad kasta anaga Dubia way soo baxday. Marka, adiga oo tan maskaxda ku heysa, waxaad hadda heli kartaa tilmaamo, talooyin iyo shaqaalaynta Imaaraadka Carabta oo leh luqaddaada.